Masedonia: Dingana folo hitantanana repoblika fôpla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2010 0:23 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Italiano, 日本語, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Kopach, mpanoratra matoandahatsoratra ho an'ilay vohikala tsy miankina Okno.mk, no namoaka lisitra iray [MKD] mitondra ny lohateny hoe “Fomba 10 hitantanana fitondràna anaty tanin'akondro.”
Ilay mpanoratra mitondra ny solon'anarana midika hoe “Mpihady” amin'ny fiteny Masedoniana, dia nanoratra fa nahazo aingam-panahy sy nampiasa ireo boky Year 501: The Conquest Continues [taona 501: mitohy ny fananihana] nosoratan'i Noam Chomsky sy Homo Postcommunisticus [ny olona taorian'ny vanimpotoana nanjakan'ny komonisma] nosoratan'i Mikloš Biro ( misy famintinana amin'ny teny Serba), ary ilay andrana famoahankevitra Eternal Fascism nosoratan'i Umberto Eco.
Nifampizaràna toy ny kafe sy labiera ary niadiana hevitra maneran-tany ny rohy mankany amin'io lisitra io tao amin'ny Facebook sy Twitter, ary tamin'ny alalan'ireo haino aman-jery hafa tao an-toerana.
Dingana 1: Karakarao ho toy ny gidro ny olona
Ny fepetra voalohany sy fototra indrindra mialoha ny hanombohana adihevitra momba ny fitantanana fitondràna anaty tanin'akondro dia ny hampivoaka mandrakariva ny toetra maha-gidro avy amin'ireo olom-pirenena. Maro ny fomba azo anaovana izany, fa matetika izany dia manodidina ny fandraisana ny olona ho vendrana, dondrona tsy manao na inona na inona fa mitazam-potsiny, mandra-pahatonga azy ireo ho izany tokoa: dondrona tsy manao na inona na inona fa mpitazam-potsiny, tsy mahalala afa-tsy ny hameno ny kibony ihany. Tokony apetrakao amina toerana iray ny vahoaka dia ampianarinao hoe eo no toerany, satria tafala tamin'ny andraikitra teo anivon'ny fiaraha-monina misy azy izy ireo.
Dingana 2: Tondroy izay hitarika azy ireo
Fantatra tamin'ny tantara fa na dia ireo Cossacks aza dia mifidy izay hitarika azy amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika: ireo zokiolona dia mifidy mpitarika antsoina hoe Ataman mandritra ny fivoriana an-kalamanjana (moa va tsy tahaka ny sarimihetsika avy any Hollywood e?). Tsy manakana ny Ataman hampiasa ny zony hanapa-doha ireo mpiray tanàna aminy araka izay tiany atao mandritra ny fotoam-pitondrany izany fanendrena avy amin'ny fifidianana demokratika izany. Toy izany koa, any amina fitondràna anaty tanin'akondro, tsy maintsy miainga avy amin'ny Mpitondra iray na maro daholo ny zava-drehetra, satria sarotra ny hametraka ny rehetra anaty vondrona politika iray. Asandratra mihoatra noho ny hafa ary mila dokadokafana ny mpitondra.
Dingana 3: Simbao ny fitokisan-tenany
Tsy azo avela hanana fitokisan-tena, fanaja-tena na fotoana ahafahany mahavita zavatra ny sarambambem-bahoaka. Izao fotsiny ihany, tsy mahazo mahavita zavatra niainga avy tamin'ny tenany izy ireo. Ny fiasan'ny olona iray ho an'ny tenany dia mety hitarika azy hahatakatra fa afaka manao zavatra tsy miankina amin'ireo mpitarika izy ireo, ary mahafantatra ny fahaiza-manaony manokana. Tsy mahazo mampivelatra ny fananany fanaja-tena avy amin'ny fahafahany mitondra ny fiainany manokana amin'ny fanaovana asa mendrika ny sarambambem-bahoaka. Ny zava-drehetra, ara-bakiteny mihitsy, dia tsy maintsy atolotra ny vahoaka: asa, valisoa, fandroahana, fanomezana alalana, tany hotrandrahana, karama, ary diplaoma any amin'ny anjerimanontolo. Tsy mahazo asiana fanavahana mihitsy amin'ny fizarana ireo tombombarotry ny orinasa mifototra amin'ny fomba fiasa na fahamendrehana, ankoatra ny fitsaràna sy ny fizahana manokana ataon'ireo Mpitarika.
Dingana 4: Tambatambazo vatomamy izy ireo
Iray amin'ity tetika hitantanana fitondràna anaty tanin'akondro ity ny fandraisana ireo vahoaka ho tahaka ny “andriamatoa” (na rahalahy/rahavavy/sakaiza…) sady mitazona azy ireo tahaka ny penina raha tianao. Tokony ampiharina eto ny fanaon'ny mpitaingi-biby manome siramamy kely ny biby hotaingenany, mba hisintonana ny fankatoavan-dry zareo sy ny fitiavany. Rehefa vita izay dia tsy misy intsony ny fanontaniana momba izay mitarika sy mitondra ankehitriny.
Dingana 5: Ampifandrafeso
Ny fepetra fototra amin'ny fitantanana fitondràna anaty tanin'akondro dia ny fampisaraham-bazana ireo vahoaka, mandemy azy ireo ny fampiadiana azy. Tombony goavana iray hafa amin'ity fomba ity ny fitarihana ny fifantohan-tsain'ny vahoaka. Raha hainao ny manangana olana ao amin'ny firenena sady voalaminao izany dia mahazo tombontsoa maro toy izao manaraka izao:
Azonao afenina any ambadika ny olana lehibe – izay mila ezaka be ny hamahàna azy
Azonao atao ny mandidy ny fandaharam-potoanan'ny olona sy izay hoeritreretiny sy hiadiany hevitra
Azonao atao ny mamaha ny olana noforoninao amin'izay fomba mahatsara endrika anao
Raha mamorona olana ianao, ka mahala azy avy amin'ny adihevitra avy eo, dia tahaka ny hoe nanome zavatra, nefa ny tena marina dia tsy nisy na inona na inona niova sady mahazo fotoana hanaovana zavatra hafa izay mavesa-danja lavitra aminao.
Dingana 6: Tereo ireo fandraharahana goavana
Taloha ireo fandraharahana “goavambe na andaniambola be” dia nikendry ny hisian'ny tsiaro tsy mety maty any antsain'ny daholobe ho an'ny mpitondra. Na dia tsy tokony hambaniana aza ny mametraka tantara manokana manavaka ny tena, ny sehatra iray lehibe amin'ireo fandraharahana goavana (tetik'asa, tranobe, fanentanana, hetsika, fanorenana, sns.) ankehitriny dia mampitombo ny fahaiza-manao, vola sy loharanon-karena hafa, ary ahafahana mampindrana sy mizara azy ireny araka izay heverinao fa mety. Manamora ny fitarihana azy ireny araka ny sitraponao ny fitobahan'ny loharanon-karena. Ankoatra ireo vokatra hafa, izany fivezivezen'ny vola izany dia ahafahanao maminavina hoe aiza, ho an'iza ary ohatrinona no omena, arakaraka ireo mahazo tombombarotra aminao. Fomba roa samihafa no mipetraka amin'izany:
fahafahana maka ampahany amin'ireo fidiram-bola
kolikoly “ara-dalàna” na “fanofanana” mpanohana.
Dingana 7: Ampariaho tsikelikely ny fampitahorana
Mba hampisy ny fanajàn'ny sarambambem-bahoaka dia tsy maintsy mamboly tahotra tsikelikely ianao. Ny fomba hanaovana izany dia amin'ny alalan'ny fisafidianana ny fanehoana sy ny fanaparitahana ireo seho sy hetsika mampatahotra. Ny fomba fanao tena mahazatra dia ny fanehoana ny niafaran'ireo mpanohitra anao sy tsy mitovy fisaina aminao. Ny tetika tena mahomby dia ny fampiasan-kery henjana dia henjana rehefa mifampitana amin'ireo mpanohitra mazandoha, mpanao ratsy ary ny olona mampiahiahy. Mampiseho hery amin'ireo malemilemy sy osa mba hahatanteraka ny fankatoavana ao aminy, izay miharo fanaiken'ny eritreritra sy mahatonga tsy fanaovana na inona na inona.
Dingana 8: Tereo hisy ny fisaritahan-kevitra
Ny fomba fitenin'ny olona azy ity dia ny hoe manao izay hampahadala azy. Ny fanasaritahana ny fiainana andavanandron'ny olona dia mandroaka ny fahafaha-misaina izay mety hampivandravandra ny zavamisy. Arakaraka ny ilentehan'ny olona ao anatin'ny fisaritahan-kevitra, fironana, filendalendana, fahatsapàna, ary fankafizana tafahoatra, no mahamora ny fitondranao azy ireo, ary mahasarotra ho azy ireo ny fitadiavany vahaolana, hahafahany manavaka ny tena misy sy ny zavatra noforonina, ny zava-misy iainana sy ny noeritreretina, ny marina sy ny lainga. Mahalasa adala ny olona ny fanaovana na filazana zavatra iray tsy mifanaraka amin'ny lojika, mifanohitra amin'ny fomba fieritreretana. Rehefa ny fisaritahan-kevitra no lasa masontsivana ankapobe fa tsy miavaka intsony dia miandoha eo ny lalao antsoina hoe “fandrebirebena” na filalaovana olona.
Dingana 9: Farito ary omeo anarana ny fahavalo
Mba hitazonana ny toeranao amin'ny maha-mpitarika tsy azo ibidibidiana anao ka tsy azo lavina ny maha-mpitarika anao dia tsy maintsy ataonao izay hampiaova ny tahotra ho lasa endrika samihafa sy ny fanapariahana azy amin'ny toerana samihafa. Fomba iray azo hanaovana izany ny fanomezana anarana mivantana sy mazava ireo ho “fahavalo,” “mpamadika,” ary “mpanohariana,” izay ahiana hampisy fanovana tanteraka tsy mampino, ny fihetsika na asa izay afaka mamadika ny tontolonao ho ambony ambany, ary mandoto izay zava-tsarobidy sy masina aminao. Mba hahalasa anao ho olo-mahery dia ilaina mba hisy ny mpifanandrina: ho an'izay Batman dia misy ny Joker, ny Superman rehetra manana ny Lex Luthor daholo, ary izay Martin Mystère dia manana “Lehilahy manao akanjo mainty” [tsy ilay mitovy amin'i Will Smith], sy ny sisa. Mila mampifangaroharo ireo ianao amin'ny fanerena sy fanapariahana hisian'ny tontolo anjakan'ny tsikombakomba sy fahatezerana amin'ny alalan'ny “fanaparitahana tahotra voalanjalanja” (7), ka mahatonga anao ho mpamonjy amin'ireo tondroina ho fahavalo.
Dingana 10: Ampirisiho ny fombafomba
Ny fombafomba no iray amin'ireo paika mahery vaika indrindra amin'ny fanapariahana ny hery avy any antampony. Nandritra ny vanim-potoanan'ny Yogoslavia taloha no nanatsaran'ny Komonista azy ity tamin'ny alalan'ny fivoriana isan-karazany, hetsiky ny tanora, fifampitam-baovao, matso sy ny toy izany. Maro ireo fomba azo ampiharana ity any amina fiaraha-monina isan-karazany any: manomboka amin'ny fampidirana politika ao amin'ny fivavahana, asa an-tsitra-po isan-karazany, fampidirana politika amin'ireo hetsika ara-panatanjahan-tena, ary ireo zavatra hafa mifanaraka amin'izany.
Niavian'ny sarikely: akondro nalain'i Jason Gulledge, avoaka eo ambanin'ny fiarovana Creative Commons-attribution 2.0.